Ngaba ukukhangela injini yokukhangela kwatshintshile incazelo yayo?
Akusiyo imfihlo kunoma ubani ukuba i-digital marketing field iguquke kwaye ayihlali. Ngaphezulu kweminyaka embalwa edluleyo, i-Google yenza utshintsho olukhulu kwiindlela zayo zokuhlela. Injongo ebalulekileyo yalezi nguqulelo kukuphucula amava omsebenzisi ngamawebhusayithi afaka kwi-TOP - hosting gratis peru. Namhlanje, iGoogle iyaqaphela kwaye iyakwazi ukuphonononga umgangatho wewebhusayithi ngenani lezinto. Yingakho umxholo wenkcazo yokuphuculwa kweenjini zokusesha sele sele ifuna imfuno ephezulu. Ukuze ufumane isikhundla esiphakeme, kufuneka ufezekise zonke iinkqubo ezifunekayo zokucwangcisa injini yeekhnoloji ezichaphazela ukuphuculwa kokusesikweni nakwi-site. Kule nqaku, siza kuxubusha indlela i-Google algorithm update ichaphazela ngayo abathengisi abasebenzisa ngokusemthethweni ubuchule be-SEO nendlela yokugcina izikhundla zesayithi ukuba imithetho ye-SEO game iya kutshintshwa.
Iintsika zangoku ze-injini yokucwangcisa injini
Zonke iingcali ze-SEO ziyavuma ukuba kukho enye into engatshintshiyo kwi-optimalization sphere - umxholo wekhwalithi. Ukuba uhlala uvelisa umxholo ophezulu, ofumana izixhumanisi ezifanelekileyo kwezinye iindawo ezigunyazisiweyo, indawo yakho iya kuba kwi-TOP phantsi kweyiphi na imeko. Nangona kunjalo, indlela yokuphucula inamba kunye nomgangatho wekhonkco ezingenayo ziye zaphelelwa yisikhathi. Okwangoku, kufuneka ukhethe umkhankaso wakho wokupasa ugxile kwizinto ezintathu eziphambili - umxholo wemgangatho, ukuthengiswa kweevenkile zentlalo, kunye nokuqhagamshelana nesakhiwo. Ukuze uzuze umgangatho ophezulu wokuphucula izikhundla, kufuneka udibanise yonke le miba yokucwangcisa.
Namhla, umxholo ube yindlela ebalulekileyo phakathi kwabathengisi be-intanethi njengoko iGoogle iqale ukuhlawula umgangatho ophantsi kunye nekopi. Ukuphucula i-rankings yakho yewebhusayithi, kufuneka uqhubeke ngokuvelisa umgangatho ophezulu kunye nokubandakanya umxholo ochaphazelekayo kwizihloko zakho zeemarike. Qinisekisa ukuba ufaka ngokuchanekileyo amagama ophando kumxholo wakho njengendlela engaphantsi kwenkcazo ye-SEO. Ngaphezu koko, kufuneka wenze ukuba umxholo wakho uhlelwe kakuhle ngokusebenzisa iibhola, imihlathi kunye neenombolo ezibalwe. I-Google ibonisa umxholo omude kunye nomgangatho olungcono kunokuba mfutshane kwaye ulula.
Ijusi yokudibanisa i-Organic
Ukwakhiwa kwezixhumanisi kuyisicwangciso esibaluleke kakhulu sokucwangcisa iwebsite esingenziwa ngokusemthethweni nangaphandle. Ukwakhiwa kwesiqhagamshelo se-SEO kunye nesikhombi kumhlophe kubhekisela ekufumaneni ijusi yolwazi kwisayithi ngeendlela zokuthumela ibhulogi, ukwabelana ngekhonkco kunye namaphepha. I-SEO yinto engekhoyo okanye engumnyama ngokuphathelele ukuthengwa kwekhonkco kunye nokuqhagamshelana nokulima. Yindlela elula yokukhangela abasebenzisi. Nangona kunjalo, kufuneka uqonde ukuba abasebenzisi abakwiziko lakho ngekhonkco lokuthenga abanakuze baphenduke kubaxhasi bakho. Ukongezelela, olu hlobo lwe-hat-hat hotimization lugwetyelwe ngeenjini zophando kwaye lunokulimaza amanqanaba akho. Kufuneka ufumane iinqununu ngokunikezelwa kunokuba uzihlawulele.
Kufuneka ucinge ukuba indlela yokufaka umbhalo we-anchor ocebileyo wegama eliphambili kwi-intanethi ye-intanethi ikhuphelwa nayiphi na ixabiso kwizinto zangoku. Ngamhla iGoogle isebenzisana neekhonkco zetekisi kwiinkcukacha zokushicilela kunye nezinye iimpapasho eziqhelekileyo njengeziqhagamshelwano ezingaqhelekanga okanye ezihlawulwayo. I-Google inqwenela ukuyeka isakhiwo esingasesikweni sokuqhagamshelisa ukususela kwiinkcukacha zokuhanjiswa kweendaba. Nangona kunjalo, ukuba abanye abantu babecinga ukuba iinkokheli zibhale malunga nemveliso okanye iinkonzo zakho kwaye zibeke izikhonkco ezifanelekileyo kuyo, ngoko oko kuthathwa njengesiqhagamshelo esivumelekileyo kwiGoogle.
kunye nenqaku lokugqibela lomkhankaso wokuphucula umgangatho wentengiso. Ngamhla, abasebenzisi abaninzi beza kwiiwebhsayithi ngokusebenzisa iziteshi zoononophelo loluntu njengoko zikhetha ukufumana ulwazi kwindlela ekhangayo nebonwayo. Ukuphucula ukuqatshelwa kwegama lakho, kuyacaca ukuba kufuneka ube noluntu oluqinileyo. Kuya kukunceda ukuba usondele ngakumbi kubathengi bakho abanokukwazi ukuqonda iimfuno zabo.